Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Gadabuursow noqonmeyso beerka jecliyaa xeydha jecliyaa ee kala doorta Saylac iyo Somaliland
Gadabuursow noqonmeyso beerka jecliyaa xeydha jecliyaa ee kala doorta Saylac iyo Somaliland
Jan 27, 2013 SOMALI NEWS 6
Somaliland sidii loo sameeyeyba dhulka Gadabuursi boobuu ku jirey. SNM tuna ma qarsan oo ujeedooyinkii loogu saldhigey qodobadeeda waxa ka mid ahaa dhulbalaadsi ku aadan dalka Gadabursi. Xasuuqii SNM u geysatay Gadabuursina beesha Ciise taakuleyn bay ku laheyd. Taa waxa ka markhaati ah hadalkii uu ka dhawaajiyay dhagarqabe ina Biixi ee odhaahdiisu aheyd iney beesha Ciise abaal ku leedahay SNM.
Islamarkaa waxaanan qarsoodi laheyn hadalkaa sida ay u taageereen gudidii Siilaanyo ee Borama caruurteena xaq darida rasaasta ula dhacdey badheedkana aheyd. Waatii la ogaa iney shaaca Borama dhexdeeda kaga qaadeen ujeedadoodu iney aheyd in maayarka Saylac la siiyo Ciise.
Ilaa maantadaa aan joogno arinta Saylac wey cakirantahay sidey wax u socdaana Gadabuursi shicib iyo kuwa dowlad ku sheega u adeegaaba war iyo wacaal kama qabaan. Waxa la yaable reer SNM oo hada heleyba meel ay u maraan markey tagayaan Saylac aaney xaaleynba Suldaanada, cuqaasha, wax garadka Gadabuursi oo saani dariiqoodii cadaa u maraan yaga oo kolba arin ay wataan la wareegaya. Xaalkiina sida la ogyahay dowlada Jabuuti ayuu ku biyo shubtay oo go’aanka soo gaadheysa. Waana hubaal marka loosoo yeedhiyo reer SNM wixii la gaadhey iney dib ugala soo noqondoonaan Gadabuursi.
Waxa taa kasii daran Gadabuursi maba ogaba wax lakala wado lagamana hadlin. Waxaan la yaabey ineyna cidiba ogeyn waxan laga baayac mushtareynayo oo xitaa marka la weydiiyo Saylici oo ah madaxweyne ku xigeen aanu war ka heyn arimaha SNM kolba dhan u wado oo sida igu maqaalo ah afkiisaa laga hayaa bal in la eego waxey la yimaadaan. Waxaasi arin maaha waa doqoniimo.
Madaxweyne ku xigeenkii dalka la magac baxey Somaliland oonan ogeyn wasiiradiisii kolba waxan ay Saylac gaynayaan ka dibna ula dhaafayaan Jabuuti waa ayaan daro iyo habacsanaan ka muuqata inankeenan ku fadhiya kursigii labaad. Wasiir Duur, wasiir Zamzam, Ina Biixi, Timacad iyo waliba waxa dibjirka Hargeysa ogyahay siduu u ogaan waayay madaxweyne ku xigeen waa amuuro aan la garaneyn.
Arintu si walba ha ahaato, dhulka Gadabuursi hore ayaa loo dayacay tan Saylacna daayac waxa u dheer doqoniimo saaran Gadabuursi. Gadabuursi hadii ay rabaan inuu dhulkoodu badbaado gaar ahaan tan Saylac iney si sharaf leh ku dhamaato ha ogaadaan dhowr qodob. Waxa laga yaabaa qodobadan aansoo wado iney dadka qaarkood ku adkaadaan ee aan horeysiiyo hafeefteydee Gadabuursow waa sidey aniga ila tahay runtuna fanto maaha walaalayaal. Hadii ay ereyadu adkaadaana liqa ileen weydinka kuwa Isaaqaba liqee anigaaba tolkiin ahe.
Gadabuursi ha kala doorto Saylac iyo Somaliland;
Gadabuursow noqon meyso sidii hore loo sheegay beerka jecliyaa xaydhana jecliyaa. Labo israaca maaha ee waa in miduun lagu ekaado. Somaliland waa cadowga Saylac waana ta inag wareejineysa. Cadowga Saylac noqon maayo sadiiqeena. Gadabuursow sidey ku dhici kartaa inaan ku aamino dowlada Somaliland iney gacanta ku qabato arimaha Saylac. Sidey ku dhici inaan dawo ka doono ka ina dilaya. Gadabuursow siday ku dhici inuu ka ina dooxayaa inoo damqado.
Gadabuursow wax is qabanaya maaha inaan waraabe adhi ku darsano. Ka Saylac bixinayaa inoo soo celin maayo. Arintu waxa weeyi in lakala doorto Somaliland iyo Saylac. Inaan Saylac arinteeda daweyno oon arimaha gacmaheena ku qabsano oo aan diidno ka duminaaya taariikhda Saylac ee siinaaya shisheeye iyo inaan aamusno oon duli caruurteena u horseedno oo Saylac la qaato wax ka dhexeeyaa ma jirto. SNM ta Somaliland oo dhulkeena iibineysa inaan hadana u xarigno oon u sacabeyno oon u mushxaradno Gadabuursow waa xaaraan. Hadal iyo murtidii Gadabuursow kuwan ina dooxey yaynaan dawo uga doonin Saylac. Kala doorta Saylac oo dhulkeena ahaata taariikhdii aan laheyna badbaadino oon cadowga Saylac ee Somaliland daaqada ka tuurno iyo inaan dowlad beeleedka Somaliland iyo beesha iska leh ku dabo feylno oon mawaadiniinta labaad (second class citizens) noqono Saylac iyo Lughaya iyo dhulkeena kalaba kolba cidey rabaan ay siiyaan.
Gadabuursi ha kala doorto Kulmiye iyo Saylac;
Kulmiye waa SNM. Waxaaney ku dhaarteen iney hirgaliyaan ujeedoyinkii ururkii xasuuqey reer Awdal ee SNM. Waa kuwa ku tala jira iney abaal u gudaan kuwii ku kaalmeeyay xasuuqii Gadabursi. Waxa cadna ineyna isqabaneyn Kulmiye siyaasadeeda iyo jiritaanka Gadabursi. Kuwa ajandahoodu yahay iney dhulka ka qaadaan Gadabuursi cadaadiyaana shicib weynaha Gadabursi in hadana Gadabuursi taageero waa wax iska hor imanaya.
Gadabuursow ceeb iyo nuqsaan bay idinku tahay inaad taageertaan Kulmiye. Kuwan arinta Saylac ku jira ee hadyada u bixinayaa waa reer Kulmiye. Waa kuwii dadkeena dariiqa ku laayay ee ku gowracey Seemaal. Sidey ku dhici markaa inaan sacabka u wada tuno Siilaanyo xusbigiisa. Waar codowga Sayalac oo Kulmiye ah waa cadowgeena. Gadabuursow sidey ku dhici inaan safka la galno ina Biixi, Timacad iyo Duur oon salaan isla taagno aan salaameyno calanka cadowgeena. Gadabuursow waa doqoniimo inaan reer Kulmiye sadiiq la ahaano. Anigu taa waan iska diidey oo Saylac baan sadiiq la ahaan ee iska diida Siilaanyo safkiisa. Saylac cadowgeedu waa cadowgeena. Kulmiye waa cadowga Saylac waana cadowgeena.
Saylici qudhiisu ha kala doorto Saylac iyo Saylici
Madaxweyne ku xigeenka dowlad beeleedka Somaliland waa nin sita naaneysta magaalada Saylac. Saylici runtii maanta waa naaneys uu ku faani lahaa nin wal oo reer Awdal ahi. Isaga iyo reerkooduba sida la ogsoonyahay waa Sayliciyiin asal ah. Waxa xiiso dhalinaya manta runtii waxa weeyi arinta Saylac oo cakiran iyo madaxweyne ku xigeenka Dowlad goboleedka Somaliland oo Saylici ah. Taasi waxey muujineysaa Saylici oo ah madaxweyne ku xigeenka dowlada iibineysa Saylac. It really is a challenge to Saylici. Saylac ma waxey ka bixi gacanta Gadabursi yada oo Saylici yahay madaxweyne ku xigeenka dowladan dumineysa taariikhda Saylac? Ma badbaadin karaase?
Arin kale waxay tahay Saylac taariikhdeeda hadii la wareejiyo sow taariikhdii awowyaashiina dumi meyso. Saylici ma ogolaan inay naaneystiisu ahaato wax Isaaq baabiiyay. Siduuse u noolaan kari ileen magaciisaa xasuusin taariikh xumadiisa hadii uu ogolaado arinta Saylac iney gacan shisheeye ku dhacdo?.
Sayliciyow sidaa darteed kala dooro magaalada aad ku naaneysan tahay ee Salac iyo adiga mansabkaaga ah madaxweyne ku xigeen. Sida haboon waa inaad badbaadisaa Saylac deena xitaa hadii aad ku waayeyso mansabkaaga. Taas macnaheedu waxa weeyi hadii arini hagaagi weydo inaad reerkaaga usoo rarato Borama ood mansabkoodanan aad siiso ku dhawaaqdo in Saylac la difaaci doono hogaankana u qabato Gadabursi iyo sidii Saylac loo difaaci lahaa.
Gadabuursow wax aan is raaci kareyn waa waajib in lakala saaro. Gadabuursow kala doorta Saylac iyo Somaliland. Ogaadana fadhi iyo fuud yicibeed inaanan la isla heleyn. Saylac ku badbaadi meyso aamuskiina. Qori caaradii bay ku badbaadi kartaa. Ogaadana kuwan ina dooxayaa ineyna inoo deyneyn Salac hadii aan ka ridan weyno.
Mudanow madaxweyne ku xigeen waa kugu waajib inaad badbaadiso magaalada qadiimiga ah eed sidato magaceeda. Noqon meyso madaxweyne ku xigeen baan ahay oo waan ka aamusi amuuraha Saylac yada ood ogsoontahay in faro xun lagu hayo magaaladii awowyaashaa ee Saylac. Sayliciyow kala dooro Saylac iyo mansabka aad Isaaqa u heyso. Maanta Sayliciyow waxey taagan tahay sidii adigu ma yarid oo waad garane odhaahdii masaarida ee dhawaaqeedu ahaa; ” Nafar walaa Masar..” waa sideediiye waxay adiga kuu taagantahay Saylac iyo madaxweyne ku xigeen .. Dooro Saylac.
Anigu aan kala doorto reer Awdalow kol hadii aan Gadabursi ahey Saylac iyo Somaliland … Waxaanan halkan si xoogle ugu dhawaaqayaa inaan doortey Saylac. Sitiin daahiya haku dhacdo Somaliland. Wakaa go’aankeygu ee akhristow kala dooro oo iisoo qor.
Colka Wadhaf Ma Lagu Dayay Samaroonka reer Jabuuti oo la sheegayo inay ololaha siyaasadda ee doorashooyinka ugu hiilinayaan ururada mucaaradka dalkaasi
6 thoughts on “Gadabuursow noqonmeyso beerka jecliyaa xeydha jecliyaa ee kala doorta Saylac iyo Somaliland”
xuseen 01/28/2013 at 10:41 pm
Waa runtii waa inaan u kacnaa oon ilaa shanaa dhulkayaga hadii aan ka seexano yaa kaloo u hadli ama u dagaalami. abdialaalow nin hurdo ayaad tahay oo wax jooga aan la socon ee ilaahay hurdada hakaa soo toosiyo aamiin.
Geesiga Damarion 01/28/2013 at 5:00 pm
Waar balaayo la abdilaalaysatide maxaad tiri ku lahaa waxaan qaatay nabada waar ka waxaad uhaysataa in nabadu ay samaroon Kaliyah ufiican tahay Waar dadoo dhan bay ufiican tahay markaas sheeko sheeko way dhamaatay waxaan u maleeyaa ciisaa ku dhalee fule nimada iskadaa oo dhacso dhulkaaga iminka Hadii kale hadhoow baad dhurmi oo ma dhexjoogin Oran anigu diyaar baan ahay geesiyaasha samaroon Guul fulayaashana xaafadahaan uga tagaynaa
AHMED NUUR 01/28/2013 at 9:23 am
AHMED NUUR 01/28/2013 at 9:22 am
SAYLAC BAAN DOORTAY
Jirde 01/28/2013 at 4:08 am
Waar ninkan muu waashay, xaagee noo wadaa Suleyman Dugsiye, adeer nabad in aan arrimaha ku dhamaysano ayaa loo baahan yahay bal horta colaadu hayna soo gaadhee, ninku fududaa sowta bidaarna ku taal.
abdialaale 01/27/2013 at 11:46 am
sxb wad salaman tahay qofba rayi buu leeye anigu anoo wax ka badan eegaya ilayn dhul ma guure nabadaan doortay iyo somaliland sababtuna waa dagal wiil kuma dhashee wuu ku dhintaa markastana wanaagan u tagnaanayaa saylacna cudi ma qaadan mana qaadanaysee dhulku waa waa sidiisi qof inagaga dhinta baa muhiim ah dad wada dhashaan nahaye wax aan dhamaysano siduu uu u hadlay maayarka saylac laba cisho ka hor si ka fiicani ma jirtee adna wax kalaa kaa guxaye balo ha kicin lama kiciyee if iyo aakhiraba waaa danbi kabaairee sxb